#Xog: Dalka ugu nabad wanaagsan Aduunka oo la shaaciyey - Get Latest News From Horn of Africa
By WARIYAHA CAALAMKA On Jun 19, 2019 Last updated Jun 19, 2019
Iceland waa waddanka ugu nabdoon Yurub, sidaa lagu shaaciyey baritaan la sameyey. Hay’adda Heerka Nabadgelyada Caalamku waxay cabbiraan heerarka xasiloonimo iyo amni ee bulshada, oo ay weheliyaan xaddiga socdaalka gudaha iyo dibeddaba ee caalamiga intisa kale, iyo heerka xagjirnimada.
Europe, oo ah gobolka ugu nabdoon adduunka ay kunool nahay, waxaa uu hoy uu yahay 17 ka mid ah 25 dal ee ugu nabada wanaagsan, haddaba wadanka kaliya ee Yurub ah ee loo tixgeliyo kuwa ugu khatarsan waa Turkiga oo booska 152-ad kaga jiraa dalalka ugu amaanka xuun adduunka.
Boqortooyada Ingiriisku waxaay booska la cariirsatey dalka yar ee dhaca asiiya ee la yirahdo Laos booska 45-aad, shan gobood ayey ka ammaan wanagsan yihiin marka loo eego sannadka 2018.
Iceland waxaa soo raacay New Zealand kaalinta labaad, Austria ayaa kaalinta 3aad ku jirta, Portugal ayaa kaalinta 4aad iyadana gashay, waxaana ku xiga Denmark oo hoos u dhigtay saameynta argagixisanimo ee 2019.
10ka dal ugu sareya ee ugu ammaan wanagsan waa Canada, Singapore, Slovenia, Japan iyo Czech Republic.
Qeybaha badankood la egey ayaa waxaa ka mid ah Nabadgelyada iyo Amni wanaajinta, gaar ahaan argagixisada, siyaasadeed iyo saameynta argagixisanimada dalalkaas
Wadar ahaan 24 dal ayaa hoos u dhigay saamaynta argagixisanimo ee 2019-ka, waxaa ka mid ah dalalka oo hogaanka uu haya Qubrus, Bosnia Herzegovina, Greece, Spain, Danmark iyo Turkiga.
Turkigu wuxuu leeyahay heerka ugu sareeya ee argagaxisnimo ee ugu xun gobolka. Kaliya sideed waddan ee ay kor u kacday cabsidda argagixisnimo ee dalalkooda, waxaa ka mid ah Netherlands, Latvia, Poland, Norway iyo Serbia.
Afgaanistaan waxaa loo aqoonsaday dalka ugu nabadgelyo xuun dunidda, Iyadda ay soo raacdo Suuriya, Koonfurta Suudaan, Yemen iyo Ciraaq.